दृष्टिकोण Archives - Tesro Ankha
दिनेशराज भुजू पानीको महिमा ठूलो छ । सृष्टि र अस्तित्व पानीमै अडेको छ । वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ, ‘पृथ्वीको पहिलो जीव साढे तीन अर्ब वर्षपहिले समुद्रको तातोपानीको मुहानतिर भएको थियो ।’ मानिस दुई लाख वर्षपहिले आएका हुन् । मानिस जहाँबाट देखापरे पनि उसको सभ्यता नदीकिनारमै विस्तार भयो । विश्वका प्रमुख सभ्यता मध्यएसियाको मेसोपोटामिया, अफ्रिकाको नाइल, दक्षिण एसियाको इन्दस र गंगामैदान, चीनको ह्वाङ हो न...
मदन राई भौतिक वस्तु, चाहे त्यो शरीर होस् वा कुनै चलाउने भाँडो । त्यो कति खप्न सक्छ भन्ने कुरा जतनमा भर पर्ने रहेछ । म र मेरो हातमा भएको गिलास र प्लास्टिक बोतल १० सेकेन्डमै पनि मर्ने वा फुट्ने (रूपान्तरित) हुने रहेछ । तर, जतन गर्न सके सय वर्ष पनि बाँच्ने, खप्ने रहेछ । म ७० वर्षको भएँ । यो गिलास किनेको पनि २० वर्ष भएछ । तर, हामी दुवै क्रियाशील छौं । म ७० वर्षको उमेरमा १७ वर्षको जस्त...
सरिता राई आमा शब्द साँच्चै प्यारो लाग्छ । आमाविनाको संसार कल्पना गर्नसम्म सक्दिनँ । मेरी आमा ५७औं वसन्तमा हिँडिरहनुभएको छ । उहाँ परिवारमात्रै नभएर, समाजका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ । मेरी आमा पेसाले शिक्षिका हुनुहुन्छ । उहाँले बरबोट प्राथमिक विद्यालय तिङ्ला प्रधानाध्यापकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । तात्कालिक तिङ्ला गाउँ विकास समिति सोलुखुम्बुबाट एसएलसी पास गर्ने पहिलो राई मह...
शिवशरण ज्ञवाली हो, म नेपाली शिक्षक । नेपाली भएकोमा गर्व पो गर्नुपर्ने हो । तर, मेरो अवस्था पनि विकसित र शक्तिशाली मुलुकको छत्रछायाँमा परेर हीन महसुुस गरिरहेका हाम्राजस्ता कमजोर देशका नागरिकको जस्तै बनेको छ । अहिलेको उत्तरआधुनिक प्रविधिको जन्जालमा जेलिएको जमानामा नेपाली पनि कहीं विषय हो र जस्तो अरूलाई होइन, आफैंलाई लाग्दोरहेछ । कहिलेकाहीं अनौठो पनि लाग्छ, ‘अझ नेपाली भाषाका पन्डाहरू विषयभित्र...
तेजकुमार राई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कियो भन्ने विषयमा बारम्बार बहस चलिरहेको अवस्थामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापनसम्बद्ध प्रतिनिधि र विद्यालयसँग सरोकारवालाले समस्यामात्र देखाउने तर समाधानको उपाय सुझाएको पाइँदैन । समस्याले समाधानसमेत ल्याएको हुन्छ । समस्या समाधान गर्न प्रयासमात्रै गर्ने हो भने समस्या थपिनुका साटो कम हुँदै जान्छ । हिजोआजका विद्यार्थीका औंला पढाइभ...
राजुविक्रम चाम्लिङ देशले रगत मागे, मलाई बलि चढाउनू रुँदिनन् मेरी आमा उनी नेपालीकी छोरी इतिहासमा सहिदहरूले बलिदान गरेका कारण नै बाँच्नेले सहज तरिकाले सास फेर्न पाएका छन् । विश्वको महान् क्रान्तिहरूमात्र होइन, नेपालको परिवर्तनमा तिनै योद्धाहरूले गरेको क्रान्ति र बलिदानले हामी नेपाली भनेर गौरवानुभूति गर्न पाएका हौं । जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्न सुरु गरेको चार सहिदहरूको निरन्तरता २००७ ...
प्रा. दिनेशराज पन्त काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेको बूढानीलकण्ठस्थानमा विष्णुको विशाल सुन्दर मूर्ति छ । त्यो मूर्ति देख्नेबित्तिकै यो मूर्ति कहिले बनेको हो, कसले बनाएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै छ । हाम्रो देश नेपालको इतिहासका धेरै पक्षबारेमा निर्णयमा पुग्न गोपाल राजवंशावलीले सघाएको कुरा प्रसिद्धै छ । यस विषयमा पनि हामीलाई गोपाल राजवंशावलीबाट मद्दत मिल्छ । राजा विष्णुगुप्तले उत्तर पहा...
श्रीमती भाग्यवती राई परापूर्वकालदेखि नै हाम्रा पुर्खा पहाडी भेगबाट खेतिकिसान गरेर फुर्सदको समयमा नुन, तेल जोहोका लागि तराई तथा आसाम, दार्जिलिङतिर आरा काट्न जान्थे रे । त्यहीक्रममा कति त औलो रोग लागेर उतै बित्थे रे । कति रोगले थला परेर फर्कन्थे । त्यस्तै भारतीय सेना र ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर प्रथम विश्वयुद्धदेखि आजसम्म अंग–भंग भए, देह त्यागे र अझ यो क्रम जारी छ । आफ्नो देश छाडेर बिदेसिनु स...
एकराज चौधरी विषयप्रवेश कक्षा तीनमा पढ्ने बेला पहिलोपटक थारू भाषामा छापिएको किताब पढ्न पाउँदा खुसीको सीमै थिएन । किताब थियो थारू भाषाको जेठो पत्रिका गोचाली । मेरो बालमस्तिष्कलाई नेपाली खसबाहेक अन्य भाषामा पनि किताब हुन्छ भन्ने थाहै थिएन । किनकि मैले सधैँ नेपाली खस भाषामा मात्रै किताब देखेको थिएँ र त्यही नै पढ्थेँ । त्यो किताब त्यसबेलाका पढालिखा युवा मेरा भान्दाइ महेश चौधरी र उहाँका साथीहरू ...
झनक कार्की जन्मभूमिको माया कसलाई लाग्दैन ? त्यसमध्येको एक म । अनि मेरो मायाको टुक्रा कदुवा । जसलाई सम्झँदा हृदयदेखि नै भावनात्मक आँधीबेहरी चलिरहन्छ । चेक गरिदिनुस् न डाक्टर साप भन्ने हो भने मेरो मुटुको धड्कन छामेर उहाँले आराम गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिन्थे सायद । आज म मनको आँधीबेहरी र भावुकतालाई यो आलेखमार्फत तपाईंसमक्ष पेस गर्दै छु । भनिन्छ, ‘निल्नुभन्दा ओकल्न गाह्रो हुन्छ ।’ तर, यो आलेख ले...